ထိပ်တန်း5ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ထိပ်တန်း5ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ
2018 တစ်ခုအဆုံးမှာနီးပါးဖြစ်ပါသည်, သာခရစ်စမတ်နီးသည်ကိုဆိုလိုနိုငျသော! ပြည်သူ့နေဆဲထိုသို့အဆင်သင့်ရတဲ့ကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ခရီးသွားများအတွက်, ခရီးစဉ်စီစဉ်မှမြင့်မားသောအချိန်ကန့်. သင်၌ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့လက်ျာဘက်မြို့ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်, အကြှနျုပျတို့သညျဖုံးအုပျတယ်ပါတယ်.
ဤဆောင်းပါးသည်သင်၌ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများအသေးစိတ်စာရင်းအားငါပေးမည်. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, အကြှနျုပျတို့သညျရှိလုပျနိုငျရှိသမျှကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမှုအရာအကြောင်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာက, ရထားထိုမြို့မှကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ.
အဲဒီမှာပွဲတော်အများကြီးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသော start အဖြစ်အမ်စတာဒမ်ဤစာရင်းတွင်အပေါ်အထူးအရပျရှိပါတယျ. နိုဝင်ဘာလထဲမှာစတင်, ထိုလူမှအမ်စတာဒမ်စတင်ကျင်းပဖို့ခရစ္စမတ်နှင့်အခြားဆောင်းတွင်း ဖြစ်ရပ်များ.
အဆိုပါ ပြတိုက် တမြို့လုံး၏ဗဟိုအတွက်ရင်ပြင်တစ်ခုရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ခရစ္စမတ်ရွာအသွင်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်. ဒီနေရာတွင်ဥရောပအကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်၏တဦးတည်းခံစားနိုငျ. ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများတစ်ဦးအဖြစ်အမ်စတာဒမ်ငျြးပွညျ့မီထက်ပိုဒါဟာ.
အမ်စတာဒမ်က၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဆောက်အဦးများနှင့်မြောက်မြားစွာတူးမြောင်းအတွက်လည်းလူသိများသည်, ဒါပေမဲ့ မြို့သူမြို့သားတွေအများကြီးပိုပြီးကမ်းလှမ်း. သငျသညျရေခဲစကိတ်စီးခြင်းခံစားနိုငျ, ရဟတ်စီး, စိတ်ကူးအစားအစာနှင့်အချိုရည်အမျိုးမျိုး, ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ.
သင်တို့သည်လည်းနေ့ကိုအဆုံးသတ်ပင်ပြီးနောက်ခရစ္စမတ်ခံစားနိုငျ. ခရစ္စမတ်အပြီးနောက်နေ့, အမ်စတာဒမ်၏လူအလက်ဝှေ့နေ့ကဆင်နွှဲ.
သငျသညျနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုဥရောပမှာနေတဲ့ရထားများကအမ်စတာဒမ်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. ဗဟိုဘူတာရုံချိတ်ဆက် ပဲရစ်, Frankfurt, ဘရပ်ဆဲလ်, လန်ဒန်, ဇူးရစ်, ဘာလင်, ပရာ့ဂ်, အများအပြားကပို. သူတို့ထဲကအများစုဟာနှင့်အခြားသောပုံမှန်လိုင်းရှိပါတယ် နယ်သာလန်နိုင်ငံမြို့ကြီးများမှ. သငျသညျဥရောပရထားနှင့်အတူချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်သင်၌ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများအတော်ကြာခံစားနိုငျ 1 ခရီးစဉ်.
ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ, အအေးဆုံးရွေး – စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်
ဒါဟာအေးခဲနေသောစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲသင်သည်ခရစ္စမတ်စတော့ဟုမ်း၌ဖြစ်ဖို့ရှေးခယျြထားကြောင်းကိုချစ်လိမ့်မယ်. ဆွီဒင်ဟာစဉ်အတွင်းအတွက်ဖြစ်ဖို့နိုင်ငံဖြစ်ပါသည် ဆောငျးရာသီအားလပ်ရက် အဆိုပါဆွီဒင်နိုင်ငံသားများသူတို့ကိုယ်သူတို့ outdo ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
အဆိုပါမြို့ကိုယ်တိုင်ကလှပအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအလှဆင်ထားသည်, နှင့် ဒါကြောင့်ခေတ်သစ်နှင့်ရိုးရာနှစ်ဦးစလုံးတစ်ခုခုကမ်းလှမ်း. ဒါဟာခရစ်စမတ်ပျော်မွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများတစ်ဦးအဖြစ်ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
ပူပြင်းတဲ့အစားအစာနှင့်အချိုရည်နှင့်အတူလမ်းများပေါ်တွင်နေရာတိုင်းအလင်းအိမ်နှင့်ခရစ္စမတ်စျေးကွက်ရှိပါတယ်. သငျသညျမြို့တော်ရဲ့မြောက်မြားစွာ Bakeries ၏တဦးတည်းအတွက်အရသာလောလောလတ်လတ်ဖုတ်သစ်ကြံပိုး buns သို့မဟုတ် Gingerbread ကြိုးစားရန်မဟုတ်အရူးဖြစ်လိမ့်မယ်! ဆွီဒင်အမျိုးမျိုးသောအစားအသောက်ရွေးချယ်မှု၏လမ်းအများကြီးမပူဇော်ဘူး, သငျသညျကော်ဖီပူပြင်းတဲ့ခွက်ကိုအတူသစ်ကြံပိုး Bun ကြိုးစားကြတစ်ချိန်ကသင်မူကား, အခြားဘာမျှမလိုခငျြပါလိမ့်မယ်.
ထို့အပွငျ, သငျသညျဥရောပ၌အလှဆုံးဟောင်းမြို့ရွာများ၏တဦးတည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်. ထိုအခါသင်သည်အမျိုးမျိုးသောနှင့်အနုစိတ်တူးမြောင်းမှာရှာဖွေနေအံ့သြစရာအတွက်ရပ်နိုင်, မြစ်လမ်းကြောင်းများ, နှင့်ပိုပြီး.
ဆွီဒင်ကိုပင်ဟေဂင်မှတဆင့်ချိတ်ဆက်သကဲ့သို့သင်တို့ဥရောပတိုက်တွင်အများအပြားနေရာတွေကနေရထားနဲ့စတော့ဟုမ်းမှရနိုင်. ထို့အပြင်, သင်တစ်ဦးကိုယူချင်ပါလိမ့်မယ် မြောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအချို့မှရထား တိုင်းပြည်. မြောက်ပိုင်းတိုင်းအလင်းတောက်ပနှင့်အလှဆုံးနေရာရဲ့.
ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ၏မြို့တော်နှင့်၎င်း၏အလှဆုံးမြို့, အဘို့အတွက်ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အများအပြားအကြောင်းရင်းများ. မြို့သည်ဒန်ညူမြစ်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးအချို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် အံ့မခန်းလှေစီး. သင်ကမြစ်ထဲကနေအားလုံးနီးပါးသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦများတွေ့နိုင်ပါသည်.
ထို့အပွငျ, သင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Buda တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ် ရဲတိုက် နှင့်ပါလီမန်အဆောက်အဦး. အဆိုပါအရာများအတွက်သကဲ့သို့သင်တို့အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌လုပျနိုငျ, တော်တော်များများရှိပါတယ်. အဆိုပါဘူဒါပက်ပန်းခြံရေခဲကိတ်ကွင်းပေါ်တွင်စကိတ်စီးခြင်းဖို့ Streetcar စီးကနေ, ဤနေရာတွင်လုပ်ဖို့အမှုအရာအများကြီးအမြဲရှိပါတယ်. လည်း, အဆိုပါ Basilica မှာ Vorosmarty ရင်ပြင်နှင့်ခရစ္စမတ်တရားမျှတမှာခရစ်စမတ်စျေးကွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့မေ့လျော့ကြဘူး.
က Harry Potter စာအုပ်ကနေဖြောင့်သည် လာ. တူကြောင်းဗဟိုရထားလမ်းဘူတာရုံဗဟို၌တည်ရှိ၏. ဒါဟာဥရောပအတွက်အဓိကမြို့ကြီးများအများစုမှဘူဒါပက်ချိတ်ဆက်နှင့်ပိုပြီး. နှစျဦးအပိုဆောင်းဘူတာလည်းမီးရထားလိုင်းများတွေအများကြီးရှိသည်, ချမှတ်ခြင်း ဘူဒါပက်ဖို့နဲ့ကနေခရီးသွားလာ တစ်ဦးလေပြေ.
ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ, ထူးခြားတဲ့ရွေး – Strasbourg, ပြင်သစ်
Strasbourg သာခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းခရစ္စမတ်မြို့တော်ရဲ့. သငျသညျခရစ္စမတ်မှာဒီအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြို့သွားရောက်လည်ပတ်လက်လွတ်မနိုင်.
Strasbourg 400 နှစ်အရွယ်ခရစ္စမတ်စျေးကွက်ဂုဏ်ယူ, အရာရှင်းလင်းစွာဤမြို့၌ခရစ္စမတ်၏အရေးပါမှုကရှင်းပြသည်.
ထို့အပွငျ, အခြားအတွေအများကြီးရှိပါတယ် မြင်လုပ်ဖို့အမှုအရာ. သင့်အနေဖြင့်ညား Strasbourg ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဒါမှမဟုတ်ခံ့ညားသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် 18ကြိမ်မြောက် ရာစု Palais Rohan. သင်တို့သည်လည်းအံ့သြစရာအတွက်မျှဝေခြင်းကျေးရွာအနီးရှိကြီးတွေခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်မြို့လယ်တဝိုက်ကျင်လည်ကျက်. အချို့သောရဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာငျသညျဤမှော်မွို့၌ပျင်းရဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်.
Strasbourg အနောက်ဥရောပ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်, ဂျာမနီနှင့်အတူနယ်စပ်အပေါ်. ယင်း၏တည်နေရာဥရောပမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများ၏အများဆုံးချိတ်ဆက်ရန်သူကဖွ. ဒါကလည်းမြို့ကိုရထားရှာဖွေတာအလွန်လွယ်ကူပါတယ်ဖွစျလိမျ့မညျကိုဆိုလို.
ခရစ်စမတ်မှာအသက်ရှင်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ – ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်
ဥရောပအကောင်းဆုံးတည်နေရာတစ်ခုမှာ, လျှင်မကမ္ဘာတွင်, ဆောင်းတွင်းကာလအတွင်း, ဆွစ်ဇာလန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကဘာကြောင့်ဂျီနီဗာင်, ဆွစ်ဇာလန်အတွက်အလှပဆုံးမြို့တစုံတ, ခရစ္စမတ်ကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံးမြို့တို့တွင်ကျိန်းသေဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါမြို့ရေကန်ဂျီနီဗာ၏ဘဏ်များအပေါ်ကျိန်းဝပ်, နှင့်ဆောင်းရာသီကြွလာသောအခါ, တစ်ခုလုံး အင်းအိုင် ရဲနေသည်. အလင်းအိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အနီးအနားစျေးဆိုင်ကနေထွန်းလင်း, တငျးကု, အများပြည်သူအဆောက်အဦးများ, နှင့်ခရစ္စမတ်အလှဆင်.
ကျနော်တို့ခရစ္စမတ်ဘလော့ဂ်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများများအတွက်ဂျီနီဗာကောက်ယူအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာစားနပ်ရိက္ခာချစ်သူများကိုလည်းမြို့တော်ရဲ့ကြိုတင်သကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်သင့်သည်ဟုခဲ့သည်-ခရစ္စမတ်စျေးကွက် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှစားနပ်ရိက္ခာကမ်းလှမ်း. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သငျသညျစျေးဝယ်သွားနိုင်ပါတယ် အဆိုပါလမ်းမှာ Walking, ပြီးတော့အထင်ရှားဆုံးအထင်ကရအဆောက်အအချို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု. ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည် နန်းတော် ကုလသမဂ္ဂ, စိန့် Pierre ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, ရေဂျက်, နှင့်ပိုပြီး.
ဂျီနီဗာရန်သင့်အားယူနိုငျကွောငျး Bern နှင့်ဇူးရစ်နဲ့တူဆွစ်ဇာလန်ရှိအခြားမြို့များမှပုံမှန်ရထားရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, အီတလီနှင့်ထံမှမယ့်ရထားတွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, နှင့်ပိုပြီး. အဆိုပါအပုဒ်များကဲ့သို့အမြို့မြို့တို့မှ go Lausanne, ပဲရစ်, ဗင်းနစ်, မီလန်, nice, Verona, အများအပြားကပို. ထို့အပြင်, ဗဟိုရထားလမ်းဘူတာရုံမြို့အလွန်စင်တာ၌တည်ရှိ၏.
ဒါကြောင့်အဲဒီမှာသင်ရှိသည်, ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့အလွန်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများတစ်ဦးပြည့်စုံစာရင်း. သင်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များချင်လျှင် ရထား Travel ထိုမြို့နှင့်အနေဖြင့်, အခမဲ့ခံစားရ ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားကိုဆက်သွယ်ပါ အချိန်မရွေး.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-christmas%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ဟန်ဂေရီ #traveleurope europetravel ဆွီဒင် အကြံပေးချက်များ trainjourney Tranride ရထား traintip ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးစဉ် ခရီးသွား travelamsterdam travelfrance travelswitzerland